China SD6N Bulldozer yoMvelisi kunye noMthengisi | Xuanhua
I-buldozer ye-SD6N yi-160 yehashe yohlobo lwe-tracker yohlobo lwe-dozer ene-hydraulic drive ngqo, i-semi-rigid suspension kunye ne-hydraulic control. Kuxhotywe ngedizili yeChangchai C6121 eyenziwe phantsi kwelayisenisi yeCaterpillar. Injini ineempawu zeteknoloji enkulu yokugcina eyaneleyo ...
I-buldozer ye-SD6N yi-160 yehashe yohlobo lwe-tracker yohlobo lwe-dozer ene-hydraulic drive ngqo, i-semi-rigid suspension kunye ne-hydraulic control. Kuxhotywe ngedizili yeChangchai C6121 eyenziwe phantsi kwelayisenisi yeCaterpillar. Injini ineempawu zobungakanani bokulingana kokubaluleka kwetorque kunye nomthamo ngokuchasene nomthwalo ongaphezulu. Isiguquli se-torque sisiguquli sehydro-mechanical esinamandla ohlukaniswe ngaphandle, aneempawu zoluhlu olubanzi lokusebenza ngokukuko. Ukulawulwa kunye nokuqhawulwa kweebrake kunokulawulwa ngomatshini wokulawula ofanayo. Inkqubo elekhtrons isebenzisa isakhiwo hydraulic ukukhuthaza, nto leyo elula kunye nokonga abasebenzi. Izixhobo zokugqibela zokuqhuba zineempawu zokungalingani okukhulu kwexabiso lokulingana. Olu hlobo loyilo lonyusa umthamo wokuthwala kwaye lulolonge ixesha eliluncedo. Idrive yokugqibela ikwasebenzisa ulwakhiwo ukuba ukususwa kwayo kukhululekile ukulungiswa, okulungele inkonzo. Ibha yesilinganisi isebenzisa ulwakhiwo lokuthambisa simahla ukunciphisa iindleko zenkonzo.
Amagiya 1st 2nd 3rd